जीवनको गोप्य दस्तावेज - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
14th August 2018, Tuesday
जीवनको गोप्य दस्तावेज
हरेक मानिसको जीवनका भोगाइ पृथक्पृथक् हुन्छन् । लामो समय सरकारी सेवामा बिताएका मदनदेव आचार्यले पनि भोगाइका धेरै अनुभव–शृंखलाहरू बटुल्न पुगे । सामान्य जन तहदेखि शक्तिशाली राजपरिवारसम्मका दिनचर्यालाई उनले नजिकैबाट छाम्न पाए, त्यसलाई मूल्यांकनको तराजुमा जोख्न पाए । यस्तो अवसर कमै मानिसहरूले मात्र पाउँछन्, जुन पूर्वकर्मचारी आचार्यले पाए । तर, उनले आफ्नो जीवनयात्राका आरोहअवरोहहरूलाई आफूभित्रै सीमित राख्न चाहेनन् । जीवनमा आर्जन गरेका ज्ञान, अनुभव र तीता–मीठा प्रसंगहरूलाई उनले बाहिर ल्याउन चाहे र त्यसकै प्रतिफल हो– ‘खिचडी’ ।
नेपालको राजनीतिमा कोइराला परिवारको उपस्थिति २००७ सालको क्रान्तिपूर्वदेखि नै रहँदै आयो । प्रजातन्त्र स्थापना भएयता कोइराला परिवारको राजनीतिमा वर्चस्व र चर्चा–परिचर्चा सदैव नै रह्यो । राजा महेन्द्रले एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था भिœयाएर आफूअनुकूल राजनीतिलाई अगाडि डो¥याउँदा पनि बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता राजनेताहरू राजनीतिक वृत्तबाट कहिल्यै ओझेलमा परेनन् । तिनै कोइराला परिवारका नातेदार पर्ने आचार्यले आफूलाई राजनीतिभन्दा सरकारी सेवामा नै जीवनभरि समर्पित तुल्याए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका उनले दरबार, कोइराला परिवार, विदेशी पाहुनाहरूसँगको सामीप्य आदि घटनाक्रमलाई नजिकैबाट नियाल्ने अवसरमा मात्र पाएनन्, व्यापारमा हात हालेर आर्थिक रूपले सुदृढ हुने बाटाहरूको खोजी पनि गरे ।
काठमाडौंका रैथाने परिवारमा जन्मिएका आचार्यले साना छँदा उटपट्याङ कामहरू धेरै नै गरे । अध्ययनमा रुचि राख्नुका साटो आफ्नै उमेर–समूहका मानिसहरूसँग बरालिएर हिँड्ने उनको स्वभावलाई न्यूनीकरण गर्न परिवारका सदस्यहरूले अनेक कदम पनि चाले । तर, हुर्किंदै गएपछि भने उनले सबै गलत क्रियाकलापलाई तिलाञ्जली दिए । उनले बाल्यकालीन दिनमा आफूले गरेका उपट्याङ कार्यहरूलाई हुबहु पस्किने काम गरेका छन् । तर, जागिरे जीवन अँगालिसकेपछि कोइराला परिवारसँगको निकटतालाई उनले यसरी खुलाएका छन्, ‘तारणी कल्पना प्रेस र पत्रिका चलाउँथे । उनकी छोरीको नाम पनि कल्पना थियो । कोइराला परिवारका सबै काठमाडौं आउँदा त्यहीँ बस्थे । त्यहाँ तुलसी गिरी, उनकी श्रीमती किशोरी र विश्वबन्धु थापा पनि बरोबर बस्ने गर्थे । एकपटकको कुरा हो, त्यहाँ भात खाने थाल थोरै तर खानेहरूचाहिँ धेरै भयौं । कसैलाई थाल र कसैलाई पत्रिकामा दिन नमिलेकाले एकैनाश गर्न हामी सबैले पत्रिकामा खाएको अहिल्यैजस्तो लाग्छ ।’
परराष्ट्र सेवामा रहँदा उनी राजा महेन्द्रसँग पनि निकट रहे । बेलायतकी महारानी एलिजावेज द्वितीया र भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेपाल भ्रमण हुँदाका क्षणलाई पनि उनले नजिकैबाट नियाल्न पाए । पछिल्लो समय भने उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गरे । ती पञ्चायतकालीन दिनहरू थिए । पञ्चायतका मन्त्रीहरूको बानीबेहोरा र कार्यशैलीलाई पनि उनले राम्ररी नै बुझ्न पाए । पछि भने उनले औषधि उद्योग खोलेर आयआर्जनका माध्यम अपनाए, चलचित्र निर्माणमा हात हाले । तर, औषधि उद्योग स्वविवेकमै बन्द गरे र चलचित्र निर्माणमा लागेर उकासिन सकेनन् ।
मूलतः आचार्यको ‘खिचडी’ पठनीयताका हिसाबले अब्बल छ । जीवनका हरेकजसो भोगाइहरूलाई मसिना खण्डहरूमा बाँडेर पुस्तकाकार रूप दिएका उनले जीवनकै गोप्य दस्तावेज खोलेको प्रतीत हुन्छ । घोष्ट राइटिङ नेपालका अध्यक्ष कमल ढकालले त्यही कारण लेखेका छन्, ‘यो खिचडीमा धेरै कुरा पाकेका छन् । धेरै कुरा मिसिएका छन् । जताबाट जसरी खाए पनि खिचडीको स्वाद एकै भएजस्तै यो पुस्तकमा जहाँ पल्टाए पनि मदनदेवलाई पाउँछौं ।’
कृति ः खिचडी
लेखक ः मदनदेव आचार्य
प्रकाशक ः घोष्ट राइटिङ नेपाल
पृष्ठ ः ३३४
मूल्य ः ३७५।–
नौनी पगाल्ने प्रयत्न
सपनाहरूको कोमल दस्तावेज
क्रान्ति–योद्धाको सफल गाथा
दुई देशका झझल्काहरू
दलित सौन्दर्य–बोध बुझ्न उपयोगी
अनेक भावबोधले समृद्ध
वैकल्पिक ऊर्जामा डरलाग्दो अनियमितता
काठमाडौं । दर्जनौं दातृ संस्थाहरूको अर्बौं रकम खर्च गरेर पनि प्रतिफल सन्तोषजनक- ...
विवादितलाई शैलेन्द्रको आशीर्वाद
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले आफ्नो सबै उठ्तीपुठ्ती- ...
सहसचिव नै मन्त्रीको सुराकी !
काठमाडौं । आफ्नै मन्त्रालयमातहतको त्यो पनि माथिल्लो तहको कर्मचारी नै आफूविरुद्ध- ...
सरकारको बाटोमा अदालतको तगारो
काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न अदालतले पटकपटक तगारो लगाएको छ । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जाँदा जाँदै गरेका नियुक्तिहरू- ...
हरेक दिन दाह्री–जुँगा मिलाएर हिँड्ने एकजना साथी दाह्री–जुँगा पालेको अवस्था देखेपछि प्रश्न गर्न मन लाग्यो, ‘दाह्री–जुँगा पाल्न थाल्नुभएछ नि, किन यस्तो विरूप हो ?’ ती साथीले जवाफ- ...
देश, समाज र परिवारभित्र दैनन्दिन रूपमा अनेक घटनाहरू जन्मिरहेका हुन्छन् । निश्चय नै, त्यस्ता घटनाहरूले मानिसको जीवनमा सानाठूला प्रभाव पार्दछन् । कुनै घटनाको प्रभाव क्षणिक हुन्छन्- ...